Ntụziaka | Otu Di na Nwunye
November 5, 2019 + American, Nri na ihe ọṅụṅụ, North America, Ezi ntụziaka
October 28, 2019 + Appetizer, Tinye, Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, Ezi ntụziaka, Russia, Russian
September 23, 2019 + American, eji megharịa ọnụ, Nri na ihe ọṅụṅụ, North America, Ezi ntụziaka, United States
Nri Chocolate Cake bụ nri dị ụtọ, ọgaranya, na-atọ ụtọ nke na-abụghị German. O nwere mgbọrọgwụ n'etiti narị afọ 19th na America mgbe onye na-eme achịcha bụ Samuel German mepụtara chocolate nke na-eso ya n'azụ - Baker Chocolate nke German. Ntuziaka maka efere apụtaghị ruo mgbe etiti afọ 20th, mgbe "uzommeputa nke ụbọchị" pụtara na ... GỤKWUO
September 16, 2019 + American, Nri ụtụtụ, Nri na ihe ọṅụṅụ, Obere ala, North America, Ezi ntụziaka, United States
N'ịbụ onye na-eto eto n'ime ime obodo America, nri ụtụtụ bụ nnukwu ihe. Ọ bụ oge ezinyere ezinụlọ, rie nri, ma malite ụbọchị ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe nile n'etiti nri ndị a bụ ụdị nkedo na nsen. Nke a bụ ihe dị iche iche dị ka soseji na àkwá nke dị mma nke ukwuu dịka ihe anyị abụọ na-etolite ... GỤKWUO
August 10, 2019 + Nri na ihe ọṅụṅụ, Italian, Italy, Isi akwukwo, Ezi ntụziaka